Hareeraha Dalkaaga waxbaa karsamaaya - Awdinle Online
Hareeraha Dalkaaga waxbaa karsamaaya
Markaan dhowr page akhriyay Xogogaalna wareeystay Saddaxdaan Su’aalood ayaa igu Soo korortay.
1-waxaa aad u xumaaday xiriirkii Eritheria iyo Qatar. Eritheria ayaa Qatar Ku eedeeysay in Qatar ey qorhseeynee xasilooni daro ah in Mucaarad hubeeysan ey ku tababaree eritheria iyo in ey qorsheeynee in la dilo Madaxweynaha Eritheria.
(Maxeey saameeyn nagu leedahay?Annagu hadda labada Dalba Xiriir wanaagsan ayaan la leenahay sideey noo saameeynee. Ciidankii naloogu tababarayay Eritheria, oo mudadii u dhamaatay, in ey Soo noqdaan waa naloo diiday, waxaa la yiri: tababar 6 bil ah ayaa u dhiman, kharajkana waxaa la wareegay UAE, Asmarna waa laga kexeeyay)
2-Turkiga iyo Qatar waxa ey Ka mideeysan yihiin Arrimaha khaliijka, laakin Arrinta Somalia waa isku khilaafsan yihiin.
Hadda Qatar waxa ey Ka codsatay Somalia in ey jarto dhamaan Xiriirka ey la leedahay Turkiga, Lana joojiyo dhamaan Mashaariicda Turkigu Ka wado Somalia, sida wax barashada, Caafimaadka, Duulimaadyada, Ciidamada , ganacsiga, iyo Deegaameynta Dadka u guurayo Turkiga, weli Somalidu kama jawaabin.
(Maxeey saameyn nagu leedahay? Turkigu waxa uu Somaliya Ka leeyahay qorshe dantiisa ah ee waqtiga dheer, Qatarna waqti gaaban. Qatar ma noo buuxi kartaa Xiriirka Ganacsi ee Turkiga & UAE, Hadda Qatar nagalama dhexeeyo Xiriir Ganacsi, waxaa Naga dhexeeyo Xiriir Siyaasadeed oo kaliya)
3- Reer Galbeedka ayaa isku raacay in ey dhamaatay Xafladii Arooska siyaasadeed ee Mr. Abye Ahmed. Kuna dhawaaqay in Ethiopia ey tahay Dagaal sokeeye ma hurto iyo “Failed State”. Iyo Ethiopia oo Soo saaridda Gaaska Somali Galbeed si buuxda ugu wareejisay Shiinaha, ogolaatayna in halkaa eynan Ka shaqeeyn Karin una soo dhawaan Karin Cid aan Shiina aheyn, xattaa Dadka Deegaanka iyo Ethiopian – Ka kale looma ogolo shaqada Hoose.
(Maxeey saameeyn nagu yeelan kartaa? Ethiopia oo burburtaa? Reer Galbeedka iyo Shiinaha oo Ku loolama Siyaasada Ethiopia)
Codsi: waxaan Ka codsanayaa Heyadaha Qaran ee Ku shaqada leh jaangooynata iyo Qorsheeynta Siyaasadeed in ey u saaraan Guddi khubaro Somaliya ah oo Ka baaraan dago, Saameeynta waxa Ka dhacayo hareerheena, iyo talaabiiyinka Ku talagalka ah ee Mustaqbalka aan qaadi leheeyn…waa iga Talo.
FG: Arragtidaada Xur ayaad u tahay, wixii Ka khaldan Ka sax, Annigu Siyaasi ma ihi, laakin Arragtidaadu waa ii muhim.(( Hareeraha Dalkeena waxbaa…….))
Previous articleJames Swan:- Somalia making remarkable progress in fighting corruption
Next articleThe President of Jubbaland State of Somalia at risks isolation over ally